musha nyika dzakabatana Singers Megan Iwe Stallion Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Wedu Megan Thee Stallion Biography anokuudza chokwadi nezve Hudiki hwake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki (Holly Aleece Thomas naJoseph Pete Jr.), Mukomana (Pardison Fontaine).
Moreso, Hupenyu hweVaraidzo, Mararamiro, Muhoro uye mambure akakosha. Megan Thee Stallion ane vanin'ina here? Ngationei.
Nyaya refu ipfupi, tinoisa pamberi mufananidzo wakazara weHupenyu nhoroondo yaMegan Thee Stallion, muimbi wekuAmerica, rapper uye munyori wenziyo. Yedu Biography inotanga kubva kuMegan Thee Stallion nguva yekutamba kusvika asimuka mukurumbira.
Mukadzi Gaga Nyaya Youcheche Plus Untold Biography Facts
Saka, heino nzira yegalari yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwaMegan Thee Stallion kuti ukwidze Biography yako chishuwo. Chokwadi, iyo mifananidzo yaunoona inopfupisa yake Yehudiki Nyaya uye Biography chokwadi.
Megan Thee Stallion Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva pamazuva ehudiki hwake kusvika asimuka mukurumbira.
Isu tinoziva Megan Thee Stallion, nekuda kwekuzvivimba kwake, hunhu, uye mazwi akajeka. Asi zvisinei nekurumbidzwa kwakasiyana pamusoro pake kubva kune vateveri vake vazhinji, vashoma chete ndivo vanoziva Megan Thee Stallion, nyaya yake yehudiki uye Biography yake.
Saka nekudaro, tinokuunzira inonakidza nyaya yaMegan Thee Stallion uye yake mimhanzi basa trajectory. Pasina kutambisa nguva ngatienderere mberi.
Taylor Swift Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Megan Thee Stallion Nyaya Yehudiki:
Kutanga, Megan Jovon Ruth Pete akaberekwa musi we 15th waFebruary 1995. Akasvika pasi pano pane imwe nguva inofadza pakati pevhiki kuna Holly Thomas nababa vake, Joseph Pete Jr.
Yedu yekuAmerican varaidzo mbiri yakazvarwa muguta rechinomwe-rine vanhu vakawanda muUS. Isu tinoziva zvakanyanya guta reSan Antonio muTexas.
Zvakare, Megan Thee Stallion akasununguka semwana mumwe chete wababa vake, Joseph Pete Mwana naamai, Holly Thomas, vane mapikicha atinoratidza pano.
Tarisa Megan Thee Stallion Vabereki - amai, Holly Thomas uye baba, Joseph Pete Jr. naye.
Megan achangoberekwa, amai vake, Holly Thomas, vakatamira kuHouston. Saka, aizoenda kumitambo yekurekodha nekambani yaMegan Thee Stallion. Akaramba kumuisa ku daycare. Sezvineiwo, amai vaMegan vakaridza mimhanzi pasi pezita rekuti "Holly-Wood."
Mariah Carey Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Saka, Megan Jovon Ruth Pete akakurira munharaunda yeSouth Park yeHouston. Pete akakurira naamai vake, Holly Thomas, mbuya uye mbuya-mbuya. Pakurekodha, Megan ainyatsoteerera zviridzwa zvairidzwa kakawanda.
Mufananidzo mumwe chete waMegan achiri mwana.
Iye zvakare akatanga kubiridzira amai vake pazera 7, achibatsirwa netoyi yaBarbie inorekodha zviridzwa uye kurova. Dzimwe nguva aiba zviridzwa zvaamai vake onyora mazwi ake. Zvakadaro haana kugovera zviroto zvake zvenziyo dzerap.
Zvisinei, vakatamirazve kuPearland, Texas, Megan paaiva nemakore 14. Pete naamai vake vakagara ikoko kusvikira ava nemakore 18. Panguva iyi, baba vake, Joseph Pete Muduku, vakanga vari mujeri kwemakore masere okutanga oupenyu hwake. Nokudaro, akarasikirwa nerovedzo youbaba.
Demi Lovato Nyaya Yenyaya yehuduku Plus Untold Biography Facts
Kunyange zvakadaro, vakaswedera pedyo pashure pokusunungurwa kwake kusvikira parufu rwake apo Megan akanga ane makore 15. Sezviri pachena, Pete akatanga kunyora ma<em>rap pazera ramakore 14.
Mufananidzo wehudiki waMegan Thee Stallion naamai vake.
Kunyange zvakadaro, akachengeta unyanzvi hwake pachake. Zvadaro pazera remakore 18, akazoratidza unyanzvi hwake hwekurepa. Asi, amai vake, Holly, vakamunyengetedza kuti amirire kusvika pazera re21 kuti aite basa rake remimhanzi.
Chikonzero chaHolly chekunonotsa Megan chaiva chekuti mabasa ake ainyanya kuratidza bonde paudiki hwake. Pasinei nokunonoka, Megan akakurudzirwa zvikuru nenhengo yemhuri yake, kunyange baba vake.
Katy Perry Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Megan Thee Stallion Mhuri Mhuri:
Kubva munyaya yedu kusvika zvino, Megan Thee Stallion aive nemavambo akazvininipisa. Apo baba vake, Joseph Pete Jr., vakanga vari mujeri, amai vake, Holly Thomas, vaishanda semuteresi. Zvakangodaro, kubva 2001 kusvika 2007, akapinda mumhanzi we rap.
Vaive mhuri yaishanda nesimba. Kunyange zvazvo vakatanga semhuri yaitambira mari shoma, vakakura vachirarama upenyu huri nani.
Megan Thee Stallion Mhuri Mavambo:
Zvino, nezve midzi yemhuri yaMegan Thee Stallion. Megan Thee Stallion ndewemuAfrica-America. Ruvara rwake runotoratidza chokwadi. Kunyangwe akaberekerwa muSan Antonio muTexas, guta harisi dhorobha rake.
Megan chizvarwa cheguta rakakura kwazvo muUS, Houston. Baba vake, Joseph Pete Jr, vanobva ikoko. Uyezve, muimbi weAmerica anotaura kuti ari muCreole zvishoma munziyo dzake "Cocky AF" uye "Freak Nasty." Iye pamwe chete ne tweeted zvakafanana muna 2017.
Vanhu vechiCreole vakabva pakusanganiswa kwemarudzi, kunyanya kwaisanganisira West Africa nevamwe vakaberekerwa munzvimbo dzakaita seFrench, Spanish, uye Indigenous America. Dzinosiyana-siyana mumadzinza uye musanganiswa.
Mukupedzisa midzi yemhuri yaMegan, iye muAfro-American uye mugari weUS. Inotevera inomiririra yemifananidzo yemhuri yake midzi.
Chiratidziro chemifananidzo chekwakabva mhuri yaMegan Thee Stallion.
Megan Thee Stallion Dzidzo:
Akapedza chikoro chesekondari muna 2013. Muvaraidzi wekuAmerica uye muimbi werap akava nedzidzo yakabudirira. Megan akaenda kuChikoro chepamusoro paPearland High School muTexas, USA. Uyezve, akanga ari kuchikoro apo baba vake vakashaya.
Megan akaenda kuChikoro chepamusoro paPearland High School muTexas, USA.
Mabasa ake ekutanga achiri kuchikoro aisanganisira cheerleading uye kutamba. Aivewo chikamu chezvikwata zvemadrill muchikoro. Nekudaro, Pete achiri mudzidzi paYunivhesiti yePrairie A&M, akatanga kurodha mavhidhiyo ake akasununguka pasocial media.
Chikamu chaPete achirwa nevapikisi vechirume mu "cypher" chakaenda kuhutachiona. Mushure mekuzorora kubva kuYunivhesiti yePrairie A&M, akaenda kuTexas Southern University kunowedzera dzidzo yake. Akabva adzidza nezvehutano hwehutano.
Doja Cat Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Megan Thee Stallion Ekutanga Basa:
Basa rake remimhanzi rakatanga achiri kuchikoro. Megan akatumira mashoma emahara ake pasocial media. Ipapo mukurumbira wake wakapararira. Ndipo paakatanga kudaidza vateveri vake kuti "hotties." Fani yake yekutanga ine zvikwereti zvekubudirira kwake kwekutanga.
Muna Kubvumbi 2016, Megan Thee Stallion akaburitsa imwe yake yekutanga, "Senge Stallion". Kuburitswa kwake kwakatevera diki SoundCloud-yakasarudzika Mixtapes yeRich Ratchet (2016) uye Megan Mix (2017).
Megan Thee Stallion Biography - Mugwagwa weMukurumbira:
MunaGunyana 2017, Megan Thee Stallion akaita nyanzvi yake ega debut neEP Make It Hot. Iyo EP's 2017 single "Vhiki Rokupedzisira muHTx" yakave yake yakabudirira zvakanyanya panguva iyi, achiunganidza mamirioni akati wandei paYouTube.
Nenguva isipi, Megan Thee Stallion akaburitsa rwiyo "Stalli (Freestyle)" sechinyorwa chemumhanzi wekupedzisira XXXTentacion's "Look at Me!" Ona vhidhiyo pano.
Panguva ino, Megan akaongororwa kuve nhengo yakakandwa yeRudo & Hip Hop, Houston. Nekudaro, iyo yaifungidzirwa spin-off yakamiswa zvachose muna Chikumi 2016.
Mukutanga kwa2018, Megan Thee Stallion akasaina chibvumirano ne1501 Certified Entertainment, yakazvimirira label muHouston inotungamirwa naT. Farris uye yaive neyaimbove mutambi webaseball Carl Crawford. Ndiye wekutanga rapper wechikadzi kusaina kune iyo brand.
Megan Thee Stallion Biography- Simuka kune Mukurumbira:
Zvekare, Megan Jovon Ruth Pete akasaina ku300 Varaidzo muna 2018, achiburitsa mixtape Fever (2019). Moreso, akaburitsa mutambo wakawedzera Suga (2020). Inotevera yaive yake inoshoropodzwa debut studio album, Good News (2020).
Sezviri pachena, mabasa ese anotaurwa kusvika parizvino akakwira pamusoro pegumi eBillboard 10. Pete's single "Savage Remix" ine Beyonce uye chimiro chake chiripo Cardi BSingle "WAP" yaive nhamba yake yekutanga neyechipiri paUS Billboard Hot 100 chart. Ona clip apa.
Her Cardi B-featured single mukuwedzera akapa Megan nhamba yake yekutanga mune dzimwe nyika dzakawanda uyewo Billboard Global 200. Mubasa rake rose, Megan akawana rumbidzo dzakawanda.
Parizvino, Akagamuchira matanhatu BET Awards, mashanu BET Hip Hop Awards uye maviri MTV Vhidhiyo Music Awards. Sezvineiwo, akagamuchira Billboard Women Music Award uye matatu Grammy Awards.
Billie Eilish Yevechidiki Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Megan nemubairo wake pa2020 American Music Awards.
Pete akave mukadzi wechipiri rapper kuhwina Best New Artist, mushure meLauryn Hill muna 1999 Pama63 epagore Grammy Awards. Muna 2020, magazini yeTime yakatumidza Megan mumwe wevanhu zana vane mukurumbira pasi rose pane yavo yegore.
Uyezve, pa2021 BET Awards, Megan Thee Stallion akahwina mana 2021 BET Awards. Akahwina mubairo weCoca-Cola Viewers 'Choice Award ye'Savage (feat. Beyonce). '
Pete akambobuda semukundi weVhidhiyo yeGore uye Best Collaboration ye'WAP.' Zvakare, Akagamuchira mubairo weBest Female Hip Hop Artist.
Megan Thee Stallion anomira aine magiramu ake panguva yemakumi matanhatu nematatu epagore GRAMMY Awards kuLA.
Megan Thee Stallion Dating ndiani?:
Megan kusvika parizvino akayemurwa nevakawanda. Chitarisiko chake uye hunhu hwerudo hunochengeta vatori venhau pazvigunwe zvavo kuti vazive nezvehukama hwake.
Megan Thee Stallion akasimbisa kudanana kwake kwekare aive naMemphis rapper Moneybagg Yo (Demario DeWayne White Jr.). Akaratidza paari 2018 EP 'Tina Snow'. Vaviri ava vakaita mwedzi yakawanda muna 2019 vasati vaparadzana. Megan akachengeta chikonzero chekurambana.
Zvakangodaro, Moneybagg Yo yakaratidza kuti vese vaive nehunhu hwehutongi uye vaipokana zvakanyanya. Memphis rapper akawedzera kuti haana kana manzwiro akashata kune aimbove musikana wake uye anomushuvira zvese zvakanaka.
Uyezve, akataurawo kuti anoziva rimwe divi rakasiyana raMegan pane iro
nyika uye inodada naye. Kuenderera mberi, Megan Thee Stallion akasangana nemumwe rapper, Pardison Fontaine. Vaviri ava vakatanga kudanana.
Megan Thee Stallion akasangana nemumwe rapper, Pardison Fontaine. Vaviri ava vakatanga kudanana.
Akazvisimbisa kuburikidza ne Instagram Live musi waKukadzi 19, 2021. Megan naPardison vakapedza Zuva reValentine pamwe chete.
Zvakangodaro, vateveri vari kunetseka nezve chengetedzo yaMegan mushure mekunge vhidhiyo yaPardi ichirovera pamusuwo wekugezera yaenda kuhutachiona. Asi ipapo, achidzima makuhwa pa Instagram Live, akati, "Akadzikama uye anotapira."
Megan Thee Stallion Hupenyu hweMhuri:
Rapper akaberekerwa kuSan Antonio akataura kakawanda kuti kusimuka kwake kwepamusoro nekuda kwekukanganisa kwemhuri yake pahudiki hwake, kunyanya amai vake.
Saka, panguva ino muBiography yedu, ngatitaure nezve nhengo yega yega yeimba yaMegan Thee Stallion.
Zvimwe NezvaMegan Thee Stallion Baba - Joseph Pete Jr:
Baba vaMegan Thee Stallion ndiJoseph Pete Jr. Anokoshesa baba vake zvakanyanya. Kunyangwe aive mutirongo mumakore ake ekukura, akaratidza rutsigiro rwakanyanya kubasa rake remumhanzi we rap mushure mekusunungurwa kwake.
Megan nababa vake, Joseph, vakaswedera pedyo zvichitevera kusunungurwa kwake kusvika pakufa kwake Megan aine makore 15.
Megan nababa vake, Joseph, vakaswedera pedyo nekusunungurwa kwake.
Zvimwe Nezve Megan Thee Stallion Amai - Holly Aleece Thomas:
Amai vaMegan, Holly Thomas, vakararama huzhinji hwehupenyu hwavo seamai vasina murume. Murume wake akanga ari mutorongo apo mwana wavo mumwe bedzi, Megan, akanga achikura. Akashanda nesimba kuti aone mafambiro aiita pamba apa kubva murume wake asipo.
Holly Thomas aive muteresi wemabhiri muSan Antonio. Asi mushure mekutamira kuHouston, Akatora basa rake rerap kubva 2001 kusvika 2007 pasi pezita remumhanzi Holly-Wood.
Megan akatanga kuratidzwa mimhanzi kuburikidza naamai vake. Zvinosuruvarisa, amai vake, Holly Thomas, vakafa munaKurume 2019 kubva pachirwere chegomarara remupfungwa. Kutaura nezvazvo, Pete aizogara achitenda.
Mifananidzo yaamai vaMegan, Holly Aleece Thomas.
Zvimwe Nezve Megan Thee Stallion Siblings:
Sezvambotaurwa kubva pakutanga kweBiography yedu, Megan Thee Stallion haana mukoma kana hanzvadzi. Ndiye ega mwana. Fungidzira kuti imhaka yekusavapo kwababa vake kubva paakazvarwa.
Semwana mumwechete wevabereki vake, Megan akanakidzwa nekutarisirwa kuzere kubva kumhuri yake. Naizvozvo, sarudzo chete yaive yekuti abudirire.
Zvakawanda NezveMegan Thee Stallion Relatives:
Muimbi weAmerica, rapper uye munyori wenziyo anofanira kunge aine dzimwe hama. Megan Thee Stallion akawedzera nhengo dzemhuri parutivi nevabereki vake. Ane vana sekuru, vana tete nana sekuru.
Zvisinei, akakura aine ukama hwaamai vake. Mbuya vake ndivo vaive vepedyo pavari vese. Asi zvino, ambuya vake vakafa mumwedzi mumwe chete naHolly Thomas.
Mbuya vaMegan ndivo vaive vepedyo pahukama hwavo hwese.
Megan Thee Stallion Hupenyu hweMunhu:
Hupenyu hwaMegan hunonakidza. Ari mudiki uye azere nehupenyu. Megan Thee Stallion anoda mhuka. Ane imbwa ina: bulldog yechiFrench inonzi 4oe (inonzi Four), Dos, Five, uye Gumi. Mukuwedzera, ane chido che anime.
Megan anonakidzwa nenhevedzano Gamba Rangu Academia. Saka nekudaro, akatovanza semutambi Shoto Todoroki weNyamavhuvhu butiro remagazini yePepa. Kubva pabasa rake rekutanga, social media yanga iri chishandiso chake chekutanga kusvika kune veruzhinji.
Megan Thee Stallion anoda mhuka. Ane imbwa ina.
Kusvika pari zvino, akafarira vateveri vazhinji kwaari. Megan anoenderera mberi nekushandisa yake social media kuchengetedza hukama nevateveri vake. Anogovera zvigadziriso zvemimhanzi yake uye hunhu, kunyanya pa Instagram. Yake Instagram chete ine vanopfuura 26M vateveri.
Megan Thee Stallion Mararamiro:
Rapper wekuAmerica, Megan Thee Stallion, akazviitira zita munhoroondo. Mutambi ane tarenda akapfuma zvinoshamisa mumakore mashoma apfuura nekuda kwemukurumbira wake. Zvakare, akawana rutsigiro rwakakura.
Megan Thee Stallion nziyo uye album kutengesa zvinomuunzira mari yakawanda. Saizvozvo, Megan Iwe Stallion Akapa Mbuya vake Rori Itsva. Motokari iyi yaive rori chena yakanga yakashongedzwa neuta hutsvuku.
Motokari iyi yaive rori chena yakanga yakashongedzwa neuta hutsvuku.
Megan Thee Stallion anoda mota dzemhando yepamusoro uye anoziva kusarudza mota yakanaka. Saka, anogona kuwana chero chinodiwa nemoyo wake. Megan ane chivakwa muHouston, Texas.
Megan anotyaira Rolls-Royce Dawn, iyo inotangira pa$346,300. Akatyairawo mota yaibhururuka murwiyo rwake rwunonzi, 'Beautiful Mistakes'.
Collage yaMegan nemota dzake dzinoverengeka.
Sekureva kweForbes, Megan Thee Stallion Networth inoita madhora 3.5 miriyoni, zvichimuita mumwe wevakadzi vakapfuma kwazvo rap pasi rose. Naizvozvo, Megan akanyoreswa Forbes ari pasi pe30. Nziyo dzaMegan uye kutengeswa kwemaabhamu ndiyo yekutanga sosi yehupfumi.
Nhau dzakanaka ndedzekuti anofarira kukurumidza kusimuka mukurumbira muAmerican Music Indasitiri neNyika.
Megan ane chivakwa muHouston, Texas.
MunaGunyana 2021, Megan akabatana naNike muchirongwa chekusimudzira uye kusimba kuburikidza neNike Training Club app.
Musi wa14 Gumiguru 2021, Megan Thee Stallion akasaina chibvumirano chakakura nekambani yepasi rose yekudya nekukurumidza Popeyes iyo inosanganisira yake Popeyes frenchise, muto mutsva unopisa (Megan Thee Stallion Hottie Sauce) uye zvakatengeswa.
Megan Thee Stallion Untold Chokwadi:
Rapper wechikadzi anoyevedza Megan Thee Stallion inyeredzi yakatsunga iri kusimukira. Akatove chikamu chikuru cheindasitiri yerap. Chii chimwe? Yedu Biography, heano zvimwe zvishoma zvinokatyamadza zvimwe pamusoro pake nemabasa ake.
Chokwadi #1: Zita reNzvimbo:
Akatora zita rake redariro "Megan Thee Stallion" nekuti ainzi "stallion" mukuyaruka nekuda kwehurefu hwake hwakanyanya (5'10" kana 178 cm) uye "mukobvu" wemuviri. Isu tinodaidza vakadzi vanozvipira uye vakareba zvinoyevedza kuMaodzanyemba kweUS semabhiza.
Chokwadi #2: Unyanzvi:
Megan anoratidza hupombwe hwake mukati memashoko ake, mavhidhiyo, uye maitiro ehupenyu. Mubvunzurudzo naPitchfork, akataura kuti hazvisi zvekuva sexy chete. Ndezvekuvimba. Zvakare nezvekuva nechivimbo mukurara kwake. Unofunga kuti akawana sei chivimbo ichocho?
Chokwadi #3: Kurudziro:
Megan Thee Stallion anodudza amai vake seyekutanga uye yakakosha pesvedzero. Akafunga zvakare Pimp C uye yake 2006 solo album (Pimpalation) maitiro kubva paudiki. Megan anoyemura kutaura kwake-rap uye anoda kukurudzira kuvimba kwakafanana mumhanzi wake.
Panguva yekugamuchirwa kwekutaura kwaMegan pa63rd Annual Grammy Awards, kwaaive
akabatana panhandare naBeyoncé kuti atore mubairo wekubatana kwavo, akati: kubva achiri mwana mudiki; aida kuva akafanana Beyonce. Ona vhidhiyo pano.
The Notorious BIG's wordplay, Lil 'Kim, uye Vatatu 6 Mafia vakakurudzirawo Megan. Zvimwe zvinosanganisira Destiny's Child, Nicki Minaj uye Q-Tip.
Chokwadi #4: Iye pachake mufananidzo:
Mukubvunzurudzwa kwakawanda, Megan akazvidaidza sa "Tina Snow." Ndiyo imwe yealter egos yake, uye zvakare zita rekutanga EP yake ndiTina Snow. Yakafurirwa naPimp C's alias Tony Snow.
"Hot Girl Meg" ndehumwe humwe hunhu hwake, hunotsanangurwa sehunomiririra divi raMegan rekubuda uye rekusava nehanya, zvichienzaniswa ne "musikana wepakoreji."
Akaunzawo "Hot Girl Meg" paEP yake, Fever. Pete akazvidaidzawo se "Thee Hood Tyra Banks".
Chokwadi # 5: Unyanzvi:
Megan Thee Stallion anodzorera kuguta kubva parunako rwake. Akapa $15,400 inokosha yekutenda turkeys. Megan akabatsira kuvapa kudzimba chiuru nemazana mashanu dzaida kuHouston Food Bank Portwall Pantry muna Mbudzi 1,050.
Uyezve, muna Gumiguru 2021, sechikamu chechibvumirano chake chakakura naPopeyes, Meg Thee Stallion, tandem naPopeyes, vakabvuma kupa mupiro wenhamba-nhanhatu kusangano rinopa rubatsiro: Houston Random Mabasa eMutsa.
Chokwadi #6: Is Megan Iwe Stallion transgender?
Muna 2019, rapper akapomerwa mhosva yekuvanza kuzivikanwa kwake kwechirume mushure mekunge vhidhiyo yake yetwerk yapararira. Muvhidhiyo, Savage hitmaker ane chipfeko chinoburitsa chinosanganisira yepepuru-yemaoko marefu chirimwa pamusoro uye dema pasi.
Akadedera akatarisana nemhomho yevanhu. Ipapo, chimwe chinhu chaiita sechadonha kubva muzasi make, zvichitungamira kune fungidziro yekuti anogona kunge ari transgender.
Chokwadi #7: Kupfura mhosva kuna Tory Lanez:
Muna Chikunguru 2020, Megan Thee Stallion akati akange aine maronda epfuti uye akavhiyiwa kuti abvise mabara.
Maererano naMegan, akanga akuvadza tsoka yake pagirazi rakaputsika mazuva matatu zvisati zvaitika paakapinda mumotokari naTory Lanez nemukadzi; mapurisa akamisa motokari, Lanez ndokusungwa achipomerwa pfuti zvichitevera kusechwa kwemotokari.
Megan akatanga kusekwa, sezvo majee mazhinji pamusoro pekupomerwa kupfurwa akapararira online. Musi waChikunguru 27, 2020, akazivisa kuti vakamupfura netsoka dzese. Akashoropodza makuhwa uye matipi muchikamu che Instagram Live.
Mwedzi wakatevera, Megan akati Lanez ndiye akamupfura. Haana kuda kuudza mapurisa zvakaitika ipapo ipapo kuitira kuchengetedza hupenyu hwake.
MunaGunyana 2020, Lanez akaburitsa dambarefu rake rechishanu, Nyeredzi, maakataura zvaipomerwa parwiyo rwese. Anoramba kuti akapfura Megan achiti iye nechikwata chake "vachiedza kumuumba".
Musi waGumiguru 2020, vakapomera Lanez mhosva yekupfura Megan Thee Stallion. Kutongwa kwaLanez kwakarongwazve. Nekudaro, zvakanonoka kusvika munaNovember, mushure mekunge gweta raLanez rakumbira kuenderera mberi.
Vapa gwaro redziviriro kuna Lanez. Anofanira kugara anenge 100 mayadhi kubva kuMegan. Zvakare, akaudzwa kuti apa pfuti dzake. Tory Lanez akapomerwa mhosva yekupfura Megan muna Gumiguru 2020.
Chokwadi #8: Mwoyo Wegoridhe:
Mumushumo wenguva pfupi yapfuura, Megan akaita chiito cherupo nekubatsira fan achangobva kufa. Mutambi uyu anonzi ndiye akabatsira kubhadhara mari yekuvigwa kwemunhu uyu, iyo yaiita mari inodarika zviuru zvisere zvemadhora.
Mutendi uyu aive Shaniah Scales, uyo akafa zvisingatarisirwi nemusi weChina. Aiva ne$16,000 XNUMX, uye mhuri yake yaisakwanisa kuwana mari yacho yose.
Shamwari yemushakabvu yakatumira Megan paTwitter ndokukumbira rubatsiro. Rapper akabvuma nemufaro uye akapa inopfuura hafu yemari yaidiwa.
Megan Thee Stallion Biography Pfupiso:
Sezvineiwo, kuti utarise Megan Thee Stallion Biography uye Childhood Nyaya, takadzidza nezvese tarenda rapper.
Tafura inotevera ndeyake Networth, zera, urefu, uremu, mukomana, chimiro chemukoma, uye hama. Moreso, kusimuka kwake mukurumbira uye nhoroondo yakazara.
Zita rizere: Megan Jovon Ruth Pete
Zita rekudanwa: Tina Snow, Meg Thee Stallion, Hot Girl Coach, Hot Girl Meg
Zuva rekuzvarwa: 15th Zuva raFebruary 1995
Nzvimbo yekuzvarirwa: San Antonio, Texas, US
Basa: American Rapper, muimbi uye munyori wenziyo
Mitauro: Hip hop, rap
Dzidzo: Pearland High School, Texas uye Prairie View A&M University
Baba: Joseph Pete Jr.
Amai: Holly Aleece Thomas
Mukomana: Brittany Morgan Williams
Zuva Chikwangwani (Zodiac): Aquarius
Hobbies: Mhuka (imbwa), kutarisa anime, social media.
kukwirira: 6 ft 5 mu (1.96 m)
Net Worth: $ 3.5 mamirioni (anorambidza)
Dzinza / Race: African-American
Social Media: MeganTheeStallion (facebook), theestallion (twitter, instagram, uye tiktok), theestallionn (snapchat) uye megantheestallion (youtube).
Tinovimba wakadzidza zvidzidzo zvishoma mukuputira Megan Thee Stallion's Biography uye Childhood Hupenyu Nyaya. Zvisineyi nemamiriro ehupenyu hwake hwepakutanga, aive achiri kushinga kuve nehope dzinotyisa.
Zvakakodzera kucherechedzwa kuti akakura pasina baba kana chero chimiro chechirume. Asi zvakare, akanga asiri mumusha wakapfuma. Kunyange zvakadaro, akazvikudzawo, achiwedzera kuzvivimba kwake.
Kwete izvozvo zvoga. Mushure mekurota, Megan Thee Stallion akatevera zviroto zvake neshungu nekushanda nesimba. Zvino, sekufamba kunoita cliche, yasara inhoroondo. Naizvozvo, mune ramangwana, isu tinoshuvira kushivirira kwako kuti urambe uchibatana. Nyorera kune zvimwe biography chokwadi nepamusoro-notch mhando.
Alicia Keys Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Britney Spears Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
Taura nesu: admin@childhoodbiography.com
Nicki Minaj Utano Nhau Plus Untold Biography Facts